Miyeey Liverpool awoodaa inay difaacato horyaalka Premier League? – Fernando Torres ayaa ka jawaabaya - Hargeele - Wararka Somali State
(Yurub) 15 Sebt 2020. Xiddigii hore kooxda Liverpool ee Fernando Torres ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Reds ay ku guuleysatay horyaalka Premier League kaddib muddo 30 sano ah.
Dhinaca kale Fernando Torres ayaa carabka ku adkeeyay in kooxda heysata horyaalka ay u baahan tahay in mar labaad ay ku guuleysato koobka.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Fernando Torres, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in Liverpool ay ku guuleysatay Horyaalka Ingiriiska, taasina waxaa sabab u ah inay u qalmeen”.
“Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay taageerayaasha, waan ogahay sida ay muhiimka ugu ahayd inay ku guuleystaan ​​horyaalka Premier League, xitaa haddii kooxdu ku guuleysatay Champions League xilli ciyaareedkii hore”.
“Marka aad ka ciyaarto Liverpool isla markaana aad xiriir la yeelato jamaahiirta, waad ogtahay sida ay muhiim ugu aheyd inay ku guulaystaan ​​Premier League kadib 30 sano ah, waxaana hubaa in qaabkaas ay ugu guuleysan doonaan. dhowr horyaal oo Premier League ah sanadaha soo socda”.
Torres oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay kooxdiisii ​​hore ee Chelsea iyo heshiisyadii ay ka sameeyeen suuqan xagaaga, wuxuuna yiri:
“Waxay dhisayaan koox weyn, kaliya ma ahan xilli ciyaareedkan, laakiin mustaqbalka”.